अर्को ताराबाट आयो यस्तो अज्ञात रेडियो सन्देश ! - Dhangadhi Khabar
बुधबार ११, जेठ २०७९ ०६:२८
अर्को ताराबाट आयो यस्तो अज्ञात रेडियो सन्देश !
यो 'ट्रिपल स्टार सिस्टम' हो। अल्फा सेन्टुरी ए र बी एक अर्काको परिक्रमा गर्छन् । अल्फा ए 'मास' र चमक (luminosity of the Sun) दुबैमा हाम्रो सूर्य भन्दा धनी छ अल्फा बी भने सूर्य भन्दा आधी जति मात्रै छ। यिनले एक अर्काको परिक्रमा झण्डै ८० वर्षमा पूरा गर्छन्। परिक्रमा गर्ने कारणले यिनीहरु बीचको दूरी थपघट भई रहन्छ। नजिक हुँदा यिनीहरु बीचको दूरी ११ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ( झण्डै सूर्य र शनि ग्रह बीचको दूरी ) र टाढा हुँदा दूरी ३५.६ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ( सूर्य र प्लूटो बीचको दूरी समतुल्य ) हुने गर्छ।
पहिला यस अमूर्त सन्देश बारे सामान्य चर्चा गरौं। परग्रही (एलियन) विषयक खोजमा आबद्ध वैज्ञानिकहरुले बेला मौकामा पृथ्वीभन्दा बाहिरबाट आएका रेडियो सन्देश प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यस्ता सन्देश अर्बौ प्रकाश वर्ष टाढाबाट प्राप्त हुने गर्छन्। वैज्ञानिकहरुले यस्ता सन्देशलाई 'फास्ट रेडियो ब्रस्ट' ( fast radio burst -frb ) नामकरण गरेका छन्। हाम्रै आकाशगंगा 'मिल्की वे' र अर्बौ प्रकाश वर्ष टाढाका 'ग्यालेक्सी' बाट आएका यस्ता रेडियो सन्देश थुप्रै पटक 'डिटेक्ट' भएका छन्।
वैज्ञानिकहरुले यस्ता प्रत्येक रेडिटो सन्देशलाई बेग्ला बेग्लै नाम दिने गरेका छन्। पृथ्वीका वैज्ञानिकले पहिलो पटक यस्तो रेडियो सन्देश 'डिटेक्ट' गर्ने सफलता पाएको धेरै समय भएको छैन। सन २००७ मा अमेरिकन खगोलशास्त्री Duncan Lorimer ले सबैभन्दा पहिला यो काम सम्पन्न गर्ने सफलता पाएका थिए। वैज्ञानिकहरुले प्राप्त गर्ने यस्ता रेडियो सन्देशमा ५० करोड़ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको मध्यम आकारको 'स्पाइरल ग्यालेक्सी' (SDSS J015800.28+654253.0 ) बाट आएको रेडियो सन्देश '१८०९१६' लाई सबै भन्दा अनौठो एवं विचित्रको मानेका थिए। यो रेडियो सन्देश कैयन पटक आवधिक रुपमा ग्रहण गरिएको थियो।
२०१९ को २४ सेप्टेम्बरमा खगोलविदले दुइवटा नयाँ रेडियो सन्देश frb २००९१४ र frb २००९१९ 'डिटेक्ट' गरेको जानकारी दिएका थिए।यी रेडियो सन्देश अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स स्थित पार्केस शहरको पार्केस रेडियो टेलिस्कोप (Parkes Radio Telescope.) ले 'डिटेक्ट' गरेको थियो। त्यस बेला यी रेडियो सन्देश आउने श्रोतको पत्ता लागेको थिएन।
अहिले आएर थप अनुसन्धान भएपछि आश्चर्यजनक तथ्य उजागर भएको छ। यी सन्देश हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी सौर्य मण्डल 'अल्फा सेन्टुरी सिस्टम' को प्रोक्सिमा सेन्टुरी तारातिरबाट आएको पत्ता लागेको छ।
निकटस्थ सौर्य मण्डलबाट रेडियो सन्देश प्राप्त हुनु एलियनको खोजीमा रहेका वैज्ञानिकका लागि उत्साहजनक बनेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार यी रेडियो सन्देशको तरंग फ्रीक्वेंसी ९८२ मेगाहर्ट्ज़ रहेको थियो। र यसको फ्रीक्वेंसीमा प्रोक्सिमा सेन्टुरी तारा अथवा यसका ग्रहहरुको खगोलीय गतिविधिका कारण निरन्तर परिवर्तन भइरहेको थियो।
वैज्ञानिकहरुले यस रेडियो सन्देशलाई 'ब्रेकथ्रू लिसिन क्यान्डिडेट १' (BLC 1) नामकरण गरेर थप 'रिसर्च' गरी रहेका छन्।
प्रोक्सिमा सेन्टुरी ताराका अहिलेसम्म ज्ञात भएका दुइवटा ग्रह छन् - प्रोक्सिमा बी र प्रोक्सिमा सी। प्रोक्सिमा बी झण्डै पृथ्वी आकारको ग्रह हो। यसको खोज (पृथ्वीवासीका निमित्त ) जम्मा ४ वर्ष पहिला सन २०१६ मा भएको थियो। यो आफ्नो सूर्यबाट (प्रोक्सिमा सेन्टुरीबाट ) ०.०५ एस्ट्रोनॉमिकल टाढा ( झण्डै ७५ लाख किमी ) छ र यसले आफ्नो सूर्यको परिक्रमा झण्डै पृथ्वीका ११.२ दिनमा पूरा गर्छ । प्रोक्सिमा सी भने पृथ्वी भन्दा झण्डै चार गुना ठूलो वरुण ग्रह आकारको छ। र यो पृथ्वी भन्दा झण्डै ७ गुना 'म्यासिभ' छ। यसको आफ्नो सूर्यसंग दूरी १.४९ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात २२,३०००,००० किमी छ। यसले आफ्नो सूर्यको एउटा परिक्रमा गर्न १९२६ दिन अर्थात पृथ्वीका ५.२८ वर्षको समय लगाउँछ।
पृथ्वीका वैज्ञानिकको बुझाइअनुसार 'प्रोक्सिमा सी'मा जीवन हुने संभावना अत्यन्त कम छ। यसको कारण भने यो ग्रह आफ्नो सूर्यदेखि 'हयाभीटेबल जोन'मा छैन । त्यसो त प्रोक्सिमा बी पनि नजिक भएका कारण ( हाम्रो सौर्य मण्डलको हिसाबमा ) 'हयाभीटेबल जोन'मा पर्दैन। तर प्रोक्सिमा सेन्टुरी तारा (सूर्य ) को क्षमता हाम्रो सूर्य भन्दा निकै कम छ। प्रोक्सिमा सेन्टुरीको डायमीटर हाम्रो सूर्यको भन्दा सातौ भाग मात्रै, घनत्व ३३ गुना कम र द्रव्यमान ८ गुना कम छ। यस कारण यसको 'लुमिनोसिटी' ( luminosity - is an absolute measure of radiated electromagnetic power ) ७५ लाख किमी टाढा हुने प्रोक्सिमा बी का लागि 'हयाभीटेबल जोन' हुन सक्छ।
हुन त प्रोक्सिमा बी जम्मा ४.२४ प्रकाश वर्ष टाढा भए पनि यो दूरी पृथ्वीको विज्ञानका लागि अकल्पनीय छ। पृथ्वीको विज्ञानले विकास गरेको सर्वाधिक गतिको रकेटबाट पनि यो दूरीमा पुग्न ७० हज़ार वर्षको समय लाग्छ। कथं कदाचित त्यहाँ मानिस छन् भने पनि अथवा कल्पना गरौं हामी मध्ये कोही त्यहाँ पुग्छ र उसले इंटरनेट मार्फ़त कुनै सन्देश पठाउछ भने त्यो सन्देश पृथ्वीमा उसका साथी भाईसम्म आई पुग्न ४.२४ वर्षको समय लाग्छ।
पृथ्वीको विज्ञानले भर्खरै मात्र क्वान्टम कम्प्यूटर बनाउने सफलता पाएको छ। यस उपलब्धिले क्वाण्टम इंटेंगलमेंट (Quantum entanglement )को ढोका उघारी दिएको छ। आउने भविष्यमा यो सम्भव भयो भने हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने परिवर्तन आउछन्। -रातोपाटी विज्ञान डेस्क ले रातोपाटीमा लेखेको छ ।
आइतबार १९, पुष २०७७ ०८:५३ मा प्रकाशित